Ivenkile ye-Intanethi ye-Apple ivaliwe, igama eliphambili likufutshane | Ndisuka mac
Olunye lweempawu ezingathandabuzekiyo zokuba i-Keynote isondele kukuvalwa kweVenkile ye-Apple ekwi-Intanethi. Kule meko, inkampani yaseCupertino sele ivale zonke iivenkile zayo ezikwi-Intanethi ukulawula nokwenza utshintsho olufanelekileyo kuyo.
Ngaphantsi kweeyure ezi-3 ukwazi zonke iindaba ezivela kuApple silindelwe kakhulu emva koko Ukuvuza kwe-AirTags iifobs eziphambili njalo njalo. I- «hype» iqala ukuhluma kuthi sonke esikhangele phambili kwiimveliso ezintsha zenkampani yeCupertino.
Akukho mfuneko yokukhumbula ukuba iwebhusayithi ye-Apple ikwi-Intanethi ayizukuvula kude kube sekupheleni kwengcaciso ephambili Xa yonke into isetafileni Nje ukuba ivulwe, siya kuba nakho ukufumana zonke iindaba malunga neemveliso ezintsha ezizisiweyo.
Ukuze ukwazi ukulandela umcimbi kunye nathi kufuneka uqhagamshelwe malunga ne-18: 30 namhlanje kwibhlog, kamva siya kuba ne-Apple podcast kwisitishi se-YouTube Kwaye uya kuba nolwazi nakwiinethiwekhi zonxibelelwano. Iapile ilinde thina.
Njengoko besitshilo, kuncinci kakhulu okuseleyo ukuqala kwenkcazo-ntetho kwaye sifuna ukubona iindaba. Njengakwinkcazo yonyaka ophelileyo, umboniso wanamhlanje usasazwa kwividiyo, ke silindele i-Keynote enamandla kakhulu eneesampulu zeevidiyo ezininzi kunye nenxaxheba elungileyo yabathathi-nxaxheba kuyo. Ngokucacileyo eyokuqala iya kuba nguTim Cook, ophetheyo ukuvula ikhethini kuyo yonke imiboniso eyenziwe yiApple kule minyaka idlulileyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Ivenkile ye-Intanethi ye-Apple ivaliwe, intetho ephambili ikufuphi